waxaad isticmaali kartaa diyaarado FS9 on FSX?
Su'aal waxaad isticmaali kartaa diyaarado FS9 on FSX?
sano 2 maalin ka hor 1 #248 by JanneAir15
Hello! Waxaan maqlay in aad isticmaali karto diyaaradaha FS9 on FSX. Waxaan leeyahay diyaarad gaar ah in aad for FSX ka heli kartaa sidaasi darteed waxaan jeclaan lahaa in la ogaado waxa suurto gal ah in aad u isticmaali on FSX. Diyaarad waa version Project Airbus A321 Sharklet. Hore ayaan isku dayay hababka qaar ka mid ah si ay u rakibi laakiinse iyagu ma ay soo shaqeeyay. Sidaas qof fadlan iga caawin kara arrintan?
sano 2 maalin ka hor 1 #252 by Gh0stRider203
haa tahay, aad awoodo. qaar ka mid ah fayl laga yaabaa in waxoogaa kala duwan on FSX badan FS9. on FSX, diyaaradda oo dhan ayaan halkan tag:
B: \_ Program Files (x86) \_ Games Microsoft \_ Microsoft Flight Qabille X \_ SimObjects \_ diyaaradaha
Ma xusuusan halkaas oo ay ku rakibi on FS9. Sidoo kale digniin kaliya cadaalad ah. MA dhan cabirrada for FS9 la FSX shaqeyn doonaan.